D & B360 na - eme ka CRM dị ike karịa | Martech Zone
Dun & Bradstreet adịlarị ọkwa ọla edo nke data azụmaahịa dị mma. Anọ m na D&B na-arụ ọrụ ma na-apụ ihe karịrị afọ 20. D&B nwere igwe ojii gbadoro ụkwụ na ya, Nke a, na-enye ohere na ntanetị ozugbo na data D & B. D & B360 jikọtara ya na CRM dị elu iji mee ka data ndị ahịa dịkwuo elu na ọdụ data Dun & Bradstreet karịrị ụlọ ọrụ nde 200 gburugburu ụwa.
Na D&B, anyị ghọtara na ogo data adịghị mma bụ otu n'ime nsogbu kachasị na mmejuputa CRM niile, na-ebute arụmọrụ ahịa dị ala. D & B360 bụ ihe ndị ahịa anyị na-erite uru ozugbo, site na ịza nsogbu ịma aka data a. Anyị ahụlarị ogo data dịwanye mma na ndị ahịa mbụ na-anabata anyị. Echere m n'onwe m na data dị elu, na-agbakwunye na CRM na-enweghị ntụpọ bụ ihe dị mkpa na ọ ga-adị ka Social CRM n'ọdịnihu. - Mike Sabin, SVP, Ahịa & Ahịa Ngwọta na D&B
Nwere ike ijikọ D & B ọtụtụ nchekwa data nke ozi azụmaahịa na ngwaọrụ data pụrụ iche na CRMs dịka Ihe omimi Microsoft, SAP CRM, Oracle Na-achọ na Siebel CRM?
Nyocha D & B360:
D & B360 Microsoft Dynamics CRM Njikọ:
D & B360 SAP CRM njikọ:
N'elu izu gara aga n'izu gara aga Ahịa Data.com ọkwa, ụlọ ọrụ a na-eme ngwa ọrụ dị egwu maka ndị na-ere ahịa na azụmaahịa, n'ihi na ọ na-ewepụ oghere na CRM gị ma na-enyere aka igosipụta ohere ọhụụ, mee ka usoro ahịa ahụ dị ngwa, nweta nghọta ka mma banyere ndị ahịa ma melite irè ahịa.
Ndị ọkachamara n'ahịa na ịzụ ahịa nwere ike ịkwụ ụgwọ ugbu a obere oge ijikwa data ma nwekwuo oge na-arụ ọrụ na atụmanya dị elu na ndị ahịa. Ike nhicha data D & B na - enyere aka melite izi ezi nke akuko iji hụ na ị na-eji oge gị eme ihe n'ụzọ amamihe.
Tags: nnyocha ngwaahịa
Sep 30, 2011 na 4: 25 AM
Ndewo, agara m na saịtị gị ma ozi ị kpuchiela nke a masịrị m nke ukwuu.